IScania ibhengeza iCarPlay ngeenqwelo zayo zelori ukuqala ngehlobo | Ndisuka mac
IScania ibhengeza iCarPlay ngeenqwelo zayo zeloli ukusuka ehlotyeni
Kucacile ukuba iilori zongeza ngakumbi nangakumbi iteknoloji kwaye ngokunyanisekileyo siyamangaliswa kukuba okwangoku uninzi lweemveliso kunye nabavelisi bezilori abanalo ukhetho lokusebenzisa iCarPlay. Ngokwenyani, zininzi iindlela onokukhetha kuzo ukunqanda ukuba ubambe i-smartphone xa uqhuba kwaye kuyacaca ukuba ingcebiso ngobulumko ukuba ungayichukumisi xa uqhuba, ngakumbi ukuba sinenqwelwana enkulu. Kule meko kubonakala ngathi ukuhlanganiswa kweCarPlay kwezi lori zilandelayo kumvelisi weScania kuyaqinisekiswa.
IScania yasekwa ngo-1900 Namhlanje umenzi waseSweden weelori ezinzima, iibhasi kunye neinjini zedizili ziseSödertälje, eSweden. Ibe luphawu lwethoba lweVolkswagen Group, emva kokuba iVolkswagen inyuse ukuthatha inxaxheba kwayo kwinkampani kwaye namhlanje yenye yezona zinto zibalulekileyo kwicandelo letraki. Itekhnoloji ekhapha iilori kunye nezithuthi zenkampani iyancipha kwaye ngoku ngokuphunyezwa kwehlobo leCarPlay, banethemba lokuphinda bathathe umtsi kumgangatho nokhuseleko lweetraki zabo.
E-Spain zininzi iimoto esele zineCarPlay efakiweyo ukuze umsebenzisi angachukumisi nantoni na kwisixhobo ngelixa eqhuba kwaye esebenzisa uSiri ukwenza imisebenzi, kodwa kuyinyani ukuba le nkqubo iseluhlaza namhlanje kwaye siyathemba ukuba I-Apple iya kongeza ukuphucula kumncedisi wemoto, kunye nokusetyenziswa okutsha okwenza kube lula ukuyisebenzisa nangaphezulu. Into ebalulekileyo njengamaxesha onke Gcina umkhondo wendlela kwaye ubeke bucala i-iPhone yethu ngelixa siqhuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IScania ibhengeza iCarPlay ngeenqwelo zayo zeloli ukusuka ehlotyeni
Ukukhutshwa kweApple iTechnology yokujonga kuqala 27
Abaphathi be-Apple bafumana ngaphezulu kwezabelo ezili-8 lezigidi